Home Wararka Muxuu ahaa Qodobkii uu Gud. Cabdi Xaashi ka diiday Rooble?
[XOG] Muxuu ahaa Qodobkii uu Gud. Cabdi Xaashi ka diiday Rooble?
Guddoomiyaha Aqalka Sare, islamarkaasna ah Guddoomiyaha siyaasiyiinta Somaliland sidoo kalana ah guddoomiyaha Madasha Badbaado Qaran Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shalay la kulmay ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Sida ay xogta ku heshay MOL, Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa la sheegay in isaga iyo Siyaasiyinta Somaliland ay iska diideen dalabka Ra’iisul wasaare Rooble ee ku saabsanaa qoondada laga siiyey guddiyada hirgelinta doorashada.
Rooble ayaa dalabkaan hordhigay Guddoomiyaha Cabdi Xaashi, balse Guddoomiyaha ayaa la sheegay inuu codsiga Ra’iisul wasaaraha u gudbiyey guddiga siyaasiyiinta Somaliland garabka uu isaga hoggaamiyo oo ayagana si cad u diiday.
Codsiga uu Rooble hor dhigay Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ahaa in garabka uu isaga hoggaamiyo laga siiyo guddiga doorashada Somaliland illaa 5 xubin halka garabka kale ee uu hor kacayo Ra’iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed la siiyo 10-ka kale.
Guddoomiye Xaashi qoondada la siiyey 35% waxaa uu u arkaa in aaney ka tarjumeyn kursiga uu ku fadhiyo iyo siyaasiyiinta Somaliland, iyada oo ninka dowladda ay taageerto ee Mahdi Guuleed uu la tagayo 65% guddiga.
Sida ay illo wareedyo lagu kalsoon karo u xaqiijiyeen MOL, Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku hanjabay inuu shir jaraa’id qaban doono haddii shirka ka socdo xerada Afisyooni looga dhawaaqo go’aan hal dhinac ah, taasoo keentay inay kulan deg deg ah ka codsadaan Axmed Madoobe iyo Saciid Deni.
Xogta aan ka helnay xafiiska Guddoomiya Cabdi Xaashi ayaa meesha ka saareyso sheegashada xafiiska Ra’iisul wasaare Rooble ee ah in kulankii dhex maray isaga iyo Cabdi Xaashi laga gaaray isfaham.
Previous articleSacid Deni oo si rasmi ah ugu dhawaaqayo in uu yahay Musharax Madaxweyne! Maxaa xigi doona?
Next articleMuxuu ku sheegay Khudbadii James Swan ka hor jeediyay Golaha Ammaanka
Saacad uu xiran yahay Hogaamiyaha Al-shabaab oo Dunida Qaali ka ah...